Vaovao - Beijing topky dia nandray anjara tamin'ny lanonana fanombohana ny volana fiarovana ny faritra ivohoan'ny fizakantenan'i mongolia.
Beijing topky dia nandray anjara tamin'ny lanonana fandefasana ny volana fiarovana ny faritra ivohoan'ny fizakantenan'ny faritra ivohoana.
Tamin'ny 1 Jona, natomboka tao Ulan Qab ny hetsika «Volana famokarana fiarovana» ​​2018 an'ny Faritra Manokana. Andro faha-17 ambin'ny folon'ny "Volam-pamokarana fiarovana" eto amin'ny firenena, ary ny lohahevitr'ilay hetsika dia "Fiainana voalohany, fampandrosoana fampandrosoana"
Tao amin'ny toerana lehibe nanatontosana ny hetsika "Volam-pamokarana fiarovana" ao amin'ny faritra mizaka tena, dia efa ho 300 ny mpanolotsaina tranokala mpamokatra fiarovana nalefa tamin'ity hetsika ity, ary nanatri-maso ny fandraisana anjara amin'ny "afo fandoroana afo any amin'ny toerana be olona", fifampidinihana ary afo hetsika fampirantiana vonjy taitra. Fantatra fa mpamono afo efa ho 100, mpamono afo maherin'ny 20 ary fiara mpamonjy voina isan-karazany no nandray anjara tamin'ity hetsika ity; mpamonjy voina 30 mahery, mpamonjy voina 3 ary olona mijaly no nalefa. Beijing Lingtian dia nitondra roboka setroka setroka sy robot mpamono afo amin'ny volana famokarana fiarovana ny faritra mizaka-tena ao Mongolia.
Ilay robot miady amin'ny afo dia mandray ny famolavolana crawler + swing arm + chassis kodiarana, izay afaka mifanaraka amin'ny tany saro-pantarina isan-karazany ao amin'ny tontolon'ny famonjena. Fitaovana fitaovana fikarohana ny tontolo iainana mba hahitana ny angon-drakitra momba ny tontolo iainana eny an-toerana mandritra ny famonoana ny afo. Ny robot mamantatra ny afo dia misy fizarana efatra: ny vatan'ny robot, ny mpanara-maso ny afo, ny fitaovan'ny detection ny tontolo iainana ary ny boaty fanaraha-maso. Ny andraikitra lehibe dia ny fanoloana ny mpamono afo hiditra amin'ny sehatry ny mora mirehitra, mipoaka, misy poizina, tsy misy oksizenina, setroka matevina ary lozam-pifamoivoizana mampidi-doza hafa hampihatra ny ady sy famonjena famonjena, ny fahitana simika ary ny fahitana ny toerana misy afo.
1. Ny volavola chassis an'ny robot mpamantatra setroka afo dia crawler + swing arm + karazana kodiarana. Ny sandry sy ny crawler avo roa heny eo alohany sy any aoriana dia afaka mitondra terrain-tany sarotra. Ny peratra anatiny vy dia ampiasaina amin'ny kodiarana, izay tsy vitan'ny fampitomboana ny hafainganana mandeha, fa miantoka ihany koa fa miempo amin'ny hafanana ambony ny fingotra. Aorian'izany dia mbola afaka mandeha ihany ianao.
2. Ny rafi-pandefasana tsy misy tariby 4G dia afaka mandefa ny angon-drakitra fanaraha-maso horonantsary sy tontolo iainana hatrany amin'ny foibe baiko amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra, mahatsapa ny rafitra baiko baiko "telo-in-iray".
3. Ny angona sy ny horonan-tsary dia mampiasa fampitana encryption misy fantsona roa, halaviran'ny serasera lava, fanoherana mahery vaika ary fanaraha-maso tsy misy tariby izay 1000 metatra.
4. Fandraisana an-tanana bateria herinaratra lehibe miampy DC maotera roa, modely aparitaka modular, maneuverability avo lenta.
5. Ny vatan'ny fiara dia manana rafitra famatsian-drano roa, izay afaka mitondra fehin-drano 80 metatra 80-metatra handehanana.
6. Ny mpanara-maso ny afo dia mibaiko lavitra ny famamafaana maimaimpoana, ny fandefasana mivantana, ary ny fanefarana azo ovaina tsy tapaka.
7. Fiarovan-tena amin'ny fantsom-panafody misy zavona anaty rano, fitsaboana mangatsiaka
8. Fanaraha-maso an-tserasera, fampitandremana mialoha, fisorohana ary fifehezana ny gazy misy poizina sy manimba, taratra nokleary, taratra hafanana, hafanana ary hamandoana ao amin'ny toerana famonjena.
9. Mety amin'ny solika sy petrokimia, asa tontolo iainana tandindomin-doza.
Fantsona 10.4 fakan-tsary fakantsary infrareda avo lenta mba hahatratrarana maody fahitana panoramic.
Fotoana fandefasana: Mar-10-2021